गभर्नर डा. नेपाल क्रस दी बोर्डरमा | eAdarsha.com
गभर्नर डा. नेपाल क्रस दी बोर्डरमा
पोखरा, २६ साउन। उद्यमशीलता जगाउने उद्देश्य राखेर होटल स्नोल्यान्डले शुरु गरेको ‘उद्यमशील कार्यक्रम’ को यसपालिको श्रृंखलामा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल उपस्थित हुने भएका छन्।
उद्यमशील बनौं भन्ने मर्मसहित ‘क्रस दी बोर्डर’ नामको संवादमूलक कार्यक्रम लेकसाइडको बाराहीचोकस्थित होटल स्नोल्यान्डमा शुक्रबार ४ बजे हलमा हुनेछ।
होटल सञ्चालक गणेशबहादुर थापाले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र मौद्रिक नीति विषयमा गभर्नर डा नेपालसँग अन्तक्रिर्या हुने बताए।
निजी क्षेत्रमैत्री भनेर चिनिने डा नेपाल यसअघि पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष थिए।
डा नेपालसँग परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार भएर काम गरेको अनुभव छ। त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका तीनवटै छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघमा सल्लाहकार एवं परामर्शदाताका रूपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा २८ वर्ष अध्यापन गरेका छन्।
उनलले बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट सन् १९९४ मा म्याक्रो इकोनोमिक्समा विद्यावारिधि गरेका छन्। साथै उनले बीपी विचार र अर्थतन्त्रसम्बन्धी पुस्तक लेखेका छन्। डा नेपाल पनि खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका कट्टर पक्षपाती हन्।
कार्यक्रमबाट युवा, विद्यार्थी, व्यवसायी र नवउद्यमी लाभान्वित हुने आशा गरिएको आयोजक होटल सञ्चालक थापाले बताए।